Sawirro: Sidee ayuu u qabsoomay kulanka Gudoomiyaha Gobolka, ku xigenadisa iyo Safiirka Turkiga ee Somalia - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Sidee ayuu u qabsoomay kulanka Gudoomiyaha Gobolka, ku xigenadisa iyo Safiirka...
Sawirro: Sidee ayuu u qabsoomay kulanka Gudoomiyaha Gobolka, ku xigenadisa iyo Safiirka Turkiga ee Somalia
Muqdisho (Caasimada Online)-Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan ”Eng. Yarisow”, ayaa maanta kulan la qaatay Safiirka Turkiga u fadhiya Somalia H.E. Olgan Baker oo ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa taageerada ay siiyaan dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan horumarinta gobolka Benaadir .
Safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya H.E. Olgan Baker ayaa dhankiisa balan-qaaday in ay sii wadi doonaan garab istaaggooda dadka Soomaaliyeed, isagoo xusay inuu kala shaqeynayo maamulka cusub ee gobolka Banaadir dib-u-dhiska iyo horumarinta Caasimadda.